Ukukhiqiza okuhle - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
I-gelatin kaGelken yenziwa eNingde, eChina. Isisekelo sokukhiqiza esithuthukile sasungulwa ngonyaka we-2000, ngemigqa yokukhiqiza eyi-X, enekhono lokukhiqiza lonyaka lamathani ayi-15,000.
Ukuqala ngokukhethwa kwezinto zokusetshenziswa, inqubo ngayinye yokukhiqiza yenzelwe, yahlolwa futhi yathuthukiswa ukukhiqiza imikhiqizo ephephile, enokwethenjelwa ye-gelatin nezixazululo zamakhasimende ethu nezimakethe. Ngasikhathi sinye, ukuze sinciphise iphutha lomuntu futhi sithuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza, sisebenzisa imishini eminingi yokukhiqiza ehamba phambili embonini, imishini yokukhiqiza eyinhloko yenkampani ingeniswa ngokuqondile isuka eYurophu.
Amandla Wokunikezela Okuqinile
Okukhipha minyaka yonke kufinyelela kumathani ayi-15,000, futhi kunganikeza i-gelatin ngekhwalithi engaguquguquki, ukulethwa okusheshayo nokusetshenziswa okuhlukile ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Okuqinile Material Ukukhethwa, Ukukhiqizwa Okuzenzakalelayo Ngokugcwele, Ukuphathwa Kwemininingwane Enobuhlakani, SOP, Umazisi Ohlukile, Umkhiqizo Olandelanayo
Ukuzibophezela Kucwaningo Nentuthuko
Sitshala inani elikhulu lezinto ezibonakalayo nezabasebenzi unyaka nonyaka emisebenzini yocwaningo neyentuthuko ukusekela izindlela ezintsha. Namuhla, sinesikhungo se-R & D esinabanjiniyela abangu-15 nabasebenzi abangu-150 abathuthukisa ubuchwepheshe obuholayo futhi sibusebenzisa ku-gelatin yethu. Eminyakeni emibili edlule, onjiniyela bakaGelken babhalise amalungelo obunikazi ayi-19.
Ukuhlinzeka ngemisebenzi eyenziwe ngezifiso
Inqubo enamandla yokukunikeza insizakalo esezingeni eliphakeme, imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Simagange ukunciphisa izindleko nezingozi zakho futhi sikhule nawe ukuze sihambisane nentuthuko esheshayo yemakethe ye-gelatin.